Star iyo siraaddo |
Tani 5 ambadeen iyo 20 Afyare payline horumariyo by IGT hubin inay soo qabtaan ku jallo oo dhan khamaara raadinaya naadi Ghanna online. Ahee Ghanna Star iyo siraaddo ballan qaaday ciyaartoyda gameplay weyn Ghanna, saasina nolol iyo theme a Chinese.
Ku saabsan horumarinta ee Megajackpots Star iyo siraaddo, naadi
Tani ciyaarta Afyare u qurux badan ayaa loo sameeyey by horumarinta IGT. Waxa ay la soo koraya kulan muddo dheer hadda, iyo waxay ka kobcaysay kulan oo inta badan magacyada waa weyn ee ganacsiga. Qaybta wanaagsan oo ku saabsan casinos ay xidhxidhaan la tahay in ay u oggolaadaan naadi Ghanna bixiso biilka feature phone ugu kulan oo ay. GIT caan ku tahay naqshadeynta hanqadhka ay abuuraan oo dhan, naadi ay / kulan waa user-saaxiibtinimo la fududahay in la fahmo gameplay. Tani waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah horumarinta ciyaarta ugu weyn caalamka.
Tani waa a 5 ambadeen iyo 20 Afyare payline la Ghanna a qaraniga ahee inuu noqdo mid dhamaadka waxaa ka mid ah. Calaamooyinka waxay ku sugan yihiin dhammaan noocyada kala duwan ee laambadihii la qurux badan loogu talagalay in la dhamaystiro ay theme hore Chinese. The feature ambadeen sabayn ayaa soo bandhigay in booska this taas oo mar kasta oo aad ka dhigi isku jira calaamado ee isku lehna iyo waxaa lagu bedelay calaamado cusub. Tani waxay u dhaco ilaa ma jiraan kulan dheeraad ah oo ka tagay.
Astaanta duurjoogta ah waa siraad cas. Calaamaddan waxaa loo bedelay kartaa calaamad kasta marka laga reebo calaamad kala firdhiso ah. Astaanta kala firdhiso waa hooska badan qurux badan. Haddii goor mid wareejin aad ka heli 2x multiplier a aad bet.
Marka laga reebo laablaabi saddexda calaamado kala firdhiso sidoo kale ay kiciyaan ka dhigeeysa wareeg bonus free. Waxaad haysan doontaa in ay soo qaado mid ka mid ah saddex iyo siraaddo iyo mid soo gaaray muujin doonaa tirada dhigeeysa free aad ku guuleystay. The dhigeeysa free noqon kartaa meel u dhaxeysa afar ilaa iyo afar iyo toban. Afyare Tani waxay sidoo kale bixisaa calaamad xiddig gunno. calaamad xiddig siinayaa multiplier bet line of labada 2x ama 3x ah mar kasta waxa ay u muuqataa on duntu ku. Oo haddii laba ka mid ah isku mar u muuqdaan markaas aad ku guuleysan doonaa isku dhafan ee loo laablaabi, kuwaas oo. Haddii aad tahay nasiib ku filan oo ay dalka afar ka mid ah in wareejin la mid ah. Waxaad ku guuleysan doonaa MegaJackpots Ghanna ku horusocod.
size bet ayaa u dhaxeysa 20p in £ 600. Waxaad ku bixin kartaa hab kasta, laakiin mid fudud waa naadi Ghanna bixiso biilka telefoonka. Qiimaha si toos ah loo siin doonaa iyada oo loo marayo biilka telefoonka aad.
All in Afyare oo dhan taas oo qiimihiisu yahay ciyaaro. Ghanna ayaa horumar waa weyn iyo design u qurux badan oo leh qaababka ay xiiso idinka dhigi doonaa inaad ku dhegeen kulankaan. The ugu fiican waxa oo dhan waa in aad haysan doonaa inaad buuxiso 100 faahfaahinta in lagu bixiyo kulankaan waxaa la samayn karaa by naadi Ghanna bixiso biilka feature phone. Sidaas daraaddeed waa in aad si xaqiiqo ah u tegi on quudhin this Chinese.